ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဂဟေပိုက်များ (astm a53 gradeberw ပိုက်) ၏ အမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ချို့ယွင်းချက်များသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အကြောင်းအရင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်မဟုတ်သော်လည်း များသောအားဖြင့် အကြောင်းရင်းများစွာ၏ ပေါင်းစပ်မှုရလဒ်ဖြစ်သည်။ဂဟေဆက်ရာတွင် ချို့ယွင်းချက်များသည် ဂဟေဧရိယာပြင်ပ အခြားအကြောင်းများကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် ချို့ယွင်းချက်များအတွက် အချက်များစွာကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်၊ အကြောင်းရင်းများကို သေချာစွာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်သာ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။
ပါဝင်မှုချို့ယွင်းချက်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံယန္တရားမှာ သတ္တုအောက်ဆိုဒ်ကို သွန်းသောသတ္တုဖြင့် extruded မလုပ်ဘဲ ဂဟေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ညှပ်ထည့်ထားသည်။
ဤသတ္တုအောက်ဆိုဒ်များသည် အများအားဖြင့် သွန်းသောသတ္တု၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် V ထောင့်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည်။ချွတ်အစွန်းချဉ်းကပ်မှုအမြန်နှုန်းသည် အရည်ပျော်နှုန်းထက်နိမ့်ပြီး အရည်ပျော်နှုန်းသည် သွန်းသောသတ္တု၏အထွက်နှုန်းထက် မြင့်မားသောအခါ၊ V ပုံသဏ္ဍာန်အဖွင့်၏အထွတ်သည် သွန်းသောသတ္တုပုံစံဖြစ်ပြီး သတ္တုအောက်ဆိုဒ်ပါဝင်မှု လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါ။ ပုံမှန် extrusion ပြီးနောက်ဆေးရုံကဆင်း။သန့်စင်သောသတ္တုရည်၏ မျက်နှာပြင်ကို ဤသတ္တုအောက်ဆိုဒ်များနှင့် ရောထားသောကြောင့် အတုပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ဂဟေဆော်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ဤချို့ယွင်းချက်သည် ပြားသွားပြီးနောက် ဂဟေကို အက်ကွဲစေကာ ဂဟေဆက်ခြင်း၏ ကျိုးသွားချိန်တွင် ပါဝင်မှုများကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ဤချို့ယွင်းချက်သည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် တည်ရှိပြီး၊ တစ်ခါတစ်ရံ တစ်ကိုယ်တည်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကွင်းဆက်တစ်ခုရှိသည်။
1. V-shaped ထောင့်ကို4~6အတွင်း တင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ထားသည်။
2. တည်ငြိမ်သော အဖွင့်ထောင့်အရှည်ကို သေချာစေရန် ယူနစ်ချိန်ညှိခြင်း။
3. ချွတ်ဆေး၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုတွင် Mn/Si အချိုးသည် 8:1 ထက် ကြီးသည်။
ဤချို့ယွင်းချက်မျိုးသည် အမှန်တကယ်တွင် pre-arc ကြောင့် ပေါင်းစပ်မှု မလုံလောက်ပါ။အများအားဖြင့်၊ အစွန်းပေါ်ရှိ burr သို့မဟုတ် oxide စကေးနှင့် သံချေးတို့သည် V angle ၏ အထွတ်ရှေ့တွင် တံတားတစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာကာ၊ short circuit သည် current ခုန်ပြီး pre-arc ဖြစ်စဉ်ကို ထုတ်ပေးကာ short-circuit ကို ဖြစ်စေသည်၊ current သည် လက်ရှိဦးတည်ချက်ကို ပြောင်းလဲစေပြီး V ထောင့်ရှိ အပူကို လျှော့ချသည်။
ချက်ခြင်း shunting ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ ချို့ယွင်းချက်များ၊ တောက်ပပြီး ပြန့်ကားသော လေယာဉ်အရိုးကျိုးခြင်းကို တခါတရံတွင် အစွန်းအထင်းအမြှေးပါး သို့မဟုတ် အောက်ဆိုဒ်စကေး၊ သံချေးတက်ခြင်း စသည်တို့မရှိသော်လည်း V ထောင့်သေးငယ်လွန်းခြင်း သို့မဟုတ် ဗို့အားမြင့်လွန်းခြင်းကိုလည်း ကြိုတင်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ arc ဖြစ်စဉ်၊ ၎င်းသည် strip ၏အစွန်းရှိ high voltage discharge ကြောင့်ဖြစ်သည်။
Pre-arc ချို့ယွင်းချက်များအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု အစီအမံများ
2. ချွတ်ဆေး၏အစွန်းသည် သန့်ရှင်းပြီး ချောမွေ့ပြီး burrs ကင်းသည်။
3. အအေးခံရေကို သန့်ရှင်းထားပါ၊ အအေးခံရေ၏ စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ထိန်းချုပ်ပြီး ဦးတည်ရာ V ထောင့်ကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုးစားပါ။
ဤချို့ယွင်းချက်သည် ကန့်လန့်ဖြတ်နှစ်ခု၏ အစွန်းများကို အပူပေးသော်လည်း လုံးလုံးလျားလျား ပေါင်းစပ်ထားခြင်း မရှိသည့်အပြင် ကောင်းမွန်သော ဂဟေဆက်မှု မဖြစ်ပေါ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ပေါင်းစပ်မလုံလောက်ခြင်း၏ တိုက်ရိုက်အကြောင်းရင်းမှာ ဂဟေဆက်နေစဉ်အတွင်း အပူမလုံလောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော ပါဝါကဲ့သို့သော ဂဟေဆက်ရာတွင် အပူမလုံလောက်မှုကို ဖြစ်စေသည့် ဆက်စပ်အချက်များစွာရှိသည်။အထွက်၊ V ထောင့်နှင့် အပူအလျား၊ သံလိုက်ဘား၏ အနေအထား၊ သံလိုက်ဘား၏ အလုပ်အခြေအနေများနှင့် အအေးခံမှု၊ induction coil အရွယ်အစား၊ ဂဟေဆော်နှုန်း စသည်ဖြင့်၊ ဤအချက်များသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လွှမ်းမိုးနေပြီး ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု ထိုကဲ့သို့သောချို့ယွင်းချက်ဆီသို့ဦးတည်။
မလုံလောက်သော ပေါင်းစပ်ချို့ယွင်းချက်များအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအစီအမံများ
1. ဂဟေထည့်သွင်းမှုအပူနှင့် ဂဟေဆော်မှုအမြန်နှုန်းနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ၊
3. V ထောင့်နှင့် အပူအလျား
4. Induction coil သတ်မှတ်ချက်များ
စက်ပစ္စည်းများ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ကောင်းမွန်သောအခြေအနေများသည် ချို့ယွင်းချက်များကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အခြေခံအခြေအနေများဖြစ်သည်။လုပ်ငန်းစဉ်ဘောင်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတို့ကို ပြီးပြည့်စုံစေခြင်းသည် ပိုက်များ၏ အရည်အသွေးကို တိုးမြင့်စေနိုင်သည်။